Sare u kac ku yimid qiimaha maciishadda magaalada Jowhar | KEYDMEDIA ONLINE
Sare u kac ku yimid qiimaha maciishadda magaalada Jowhar
Dad-weynaha ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa dalbanaya in Maamulka HirShabeelle iyo Dowladda dhexe, labaduba ay gacan weyn ka geysteen sidii loo furi lahaa wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar, kadib sare u kac xooggan oo ku yimid maciishadda.
JOWHAR, Soomaaliya - Shacabka ku dhaqan magaala Madaxda gobolka Shabeellaha dhexe ee Jowhar, ayaa ka cabanaya kororka qiimaha maciishadda oo sare u kacday kadib roobabkii lixaadda lahaa ee sababay daadadka xoogan.
Xarunta Maamulka HirShabeelle, ayaa wajaheysa caqabad hor leh, kadib daadad iyo dagaallo ka socday maalmahaan, waxaana la soo warinayaa in qiimaha la kala siisto raashinka uu gaaray halkii ugu sarreysay.
Ganacsiga magaalada Jowhar ayaa ku xiran, Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, hayeeshee jidka iska xariiriya labada magaalo ayaa go’ay, kadib daadad xoogan oo ku dhuftay billowgii bishaan.
Qiima kororka maciishadda Jowhar ayaa imaanaya ka gadaal digniio ka dhan ahaa masiibooyin taxane ah oo bani'aadamnimo, sida daadadkii xoogga lahaa ee dhowaan dhacay, iyo abaar hore loo saadaaliyay kuwaas oo saameyn ku yeelan doona in ka badan lix milyan oo qof oo u baahan doona gargaar deg deg ah.